Modelina manokana MS-08 / MS-09 ...
Fitaovana maro ...
Famaritana isa naoty 220V 6 ...
Famaritana modely MK-03 TOSIKARATRA 220 ...
Famaritana modely MH-09 TOSIKARATRA ...
Bibikely Portable R ...
Famaritana modely MH-08 naoty P ...
Sakan'ny antsy miaraka amina fitaovana tonga lafatra: plastika abs, fitaovana thermoplastic ary kilasy sakafo. Ny famatsiana herinaratra miaraka amin'ny 36W 0.38A, ny refy fonosana dia 290 * 227 * 340mm, ny lanjany dia 3.1kg. Fikarakarana mora - Fanadiovana mora amin'ny rano amin'ny paompy amin'ny tanana. Ity maranitra antsy ity no fomba tsara indrindra hanamafisana ny antsy an-dakozinao sy hitehirizanao ny fotoananao. Fitaovana iray manontolo, setsa antsy 5 ary hazokely fihinanana no azo diovina indray mandeha
UV Cutting Board Sterilizer Cabinet dia miampy 1-3pcs TPU chopping board izay bakteria sy porofo malemy ary mora diovina. Ny fiasa feno dia mahatonga anao hanana fomba fiaina salama kokoa. Tsotra ny miasa, avo lenta ary mahomby. Fahombiazan'ny famonoana otrikaina avo hatramin'ny 99,99%.
Ny mpamafa rivotra sy mpankafy an'habakabaka 2-in-1 dia mampangatsiaka ny habakao rehefa manivana 99,79% ny alergen sy ny loto. Ny endrika tsy misy fotony dia mora diovina sy azo antoka ho an'ny ankizy. Ampidino ny tenanao rehefa milamina ny sainao amin'ny sivana rivotra. Mpankafy tsy misy fotony miaraka amin'ny fiasa manadio sy manadio, tsofohy ary ario ny zavona miaraka amin'ity mpankafy ity.
Fanaparitahana DC Fan
Fanodina rivotra DC. BLDC motera mivantana amin'izao fotoana izao, famolavolana kely ary fitehirizana angovo, azo ampiana fanafody moka. Haingam-pandeha ho an'ny famatsian-drivotra. Mikorisa mandeha ho azy amin'ny sisiny, ambony sy ambany. Azo ahitsy. 1-2-4-8H fanoloana fotoana. Fomba haingam-pandeha 5: ara-dalàna, voajanahary, matory, reny sy foetus, maody ECO. Feo ambany miaraka amin'ny famatsian-drivotra 11dBA ihany .Ety metatra lavitra.
Mpankafy manadio tilikambo tsy misy fotony
Ny mpankafy fanadiovan-drivotra 2-in-1 dia mampangatsiaka ny habakao rehefa manivana 99,79% ny alergen sy ny loto. Ny famolavolana bladeless dia mora diovina sy azo antoka ho an'ny ankizy. Raha tsy misy grill grill na blades dia mora kokoa ny mamafa tsotra izao ny fampiasana azy manokana amin'ny toerana anatiny sy birao hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra. Manampy ny mpifoka sigara hampihenana ny loto ao anaty rivotra. Afaka manampy amin'ny fanatsarana ny soritr'aretin'ny aretin'ny asma sy ny vovobony. Tsara ho an'ny efitranon'ny ankizy, efitrano fandraisam-bahiny ary birao kely hatramin'ny 30 metatra toradroa.
Famolavolana fampangatsiahana rivotra kely azo entina kely miaraka amina mpankafy roa ho an'ny rivotra mahery. Manana famatsian-drivotra telo ambaratonga izy io. Super mangatsiatsiaka sy mamelombelona miaraka amin'ny ranomandry sy rano, fiasa mandoto tsy misy zavona, famoahana ion ratsy, fantson-drano misaraka, fadio ny famoahana rano. Mitazona ny hamandoan'ny hoditrao ary avy eo mamoaka rivotra mangatsiatsiaka hanalavitra anao amin'ny rivotra maina sy hankafizanao ny fahavaratra mangatsiaka sy vaovao.
Sakafo vary ambany-siramamy ao an-trano lasopy mandeha ho azy misy asa maromaro natokana vilany vary ara-pahasalamana ambany mba hampihena ny siramamy. Ataovy mora toy ny mifoka rivotra ny fahaverezana siramamy, manaova fanazaran-tena ary mampihena lanja ary mihinana ara-dalàna. Satiety ambany siramamy, bary siramamy ambany tsy matavy, mora mampihena ny tsirony mihidy siramamy ho an'ity manaikitra ity, ry fitiavana!
Modely sy azo ampiharina, mora entina sy ampiasaina. Manify sy matevina, tsy dia mitaky habaka be izany. Tsy mahasosotra ny latabatra fiasan'ialanao ity fandrahoan-tsakafo ity. Na, tahirizo ao anaty vatasarihana izany! Fisorohana ny fanafanana maina sy fiarovana. Alimina alimina PTC heater, azo antoka kokoa. Fanafana hafanana manodidina, andrahoina tanteraka ny sakafo. Sakafo kilasy sakafo 304 Sakafo sakafo dia tsara ho an'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fitehirizana sakafo, 900ml fahaizana.